सचेततापूर्वक दसैं मनाऔं - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home बिचार सचेततापूर्वक दसैं मनाऔं
By नीमा धिताल (पण्डित)
नेपालीहरूको महान् चाडका रूपमा विजया दशमीलाई मानिन्छ । यसलाई बडा दसंै पनि भनिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि यो सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मनाइन्छ ।
विश्वभरि १४ प्रतिशत मानिस हिन्दू धर्म मान्दछन् भने नेपालमा करिब ८१ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका छन् । हिन्दू धर्म सबैभन्दा पुरानो धर्म भएकाले यसलाई सनातन धर्म पनि भनिन्छ । हिन्दूहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक पर्व बडा दसैंमा फुलपाती, महाअष्टमी, माहनवमी÷रामनवमी विजयादशमीलाइ विषेश उत्सवको रूपमा मनाइन्छ ।
यसवर्ष पनि हर्ष र उमंगको पर्व बडा दसंै नेपालीहरूको घरघरमा भित्रिइसकेको छ । हिन्दू धर्ममा महिला र पुरुष दुवैलाई समान मानिन्छ । महिलालाई पनि भगवतीको रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन हुन्छ, जुन धर्मको मुख्य विषेशता हो । दसंैमा शक्तिस्वरूपा देवीदुर्गाको नौ दिनसम्म विशेष पूजा–अर्चना गरी १०आंै दिनमा प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदेशीयका र काम विशेषले अथवा अध्ययनका लागि गाउँ छोड्नेहरू गाउँघर फर्किने, घरपरिवार सबै जम्मा हुने रमाउने समयमा यो वर्ष निर्धक्क गाउँमा गएर दसैं मनाउन पनि डर भएको छ । नवदुर्गाको प्रसाद, टीका र जमरा बुढापाका र मान्यवरबाट लगाउने र आशीर्वाद लिने पर्व बडा दसैंमा पनि घर परिवार मान्यजनको नजिक हुन असहज हुँदै छ । यसपालि मन खुलेर आएकै छैन । विश्वमा कोरनाको कारण अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । विश्वका शक्तिशालीदेखि साना र विकासोन्मुख देश आक्रान्त भएका छन् । रोग तथा भोकको मारमा गरिब दुःखीहरू परेका छन् ।
चाडबाडसँगै बढ्न सक्ने बजार भिडभाड र जमघटले गाँउघरसम्मै संक्रमण फैलने खतरा देखिन्छ
दसैं सबै उमेर समूहका लागि भव्य र मनपर्दाे उत्सव हो । बालबालिकाको लागि त झन् औधि रमाइलो हुन्छ । नयाँ लुगा लगाउने, चंगा उडाउने, मिठो खाने, मामाघर जाने, पिङ खेल्ने मान्यजनको आर्शीवादसँगै दक्षिणा पाउनेसम्मको अवसर हुन्छ । यस पर्वले टाढा रहेका परिवार र आफन्तहरूलाई भेट्ने अवसर सिर्जना गर्दछ ।
सरकारले बडा दसैंलगायतका चाडपर्व घरपरिवारमा सीमित गरी मनाउन आग्रह गरिरहेको छ । जनता सचेत नभए सरकारले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरेका हरेक पहल असफल हुने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीरता आउनेछ । स्वअनुशासन, व्यक्तिगत सरसफाइ, स्वस्थकर खानाले व्यक्तिलाई तन्दुरुस्त रहन सहयोग गर्दछ । अशिक्षा, अज्ञानता, अभाव, प्रभाव लापर्बाहीले व्यक्तिको स्वस्थता पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
नेपालमा कोरोनाको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । दैनिक रूपमा संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दै १ लाख ३० हजारमाथि पुगिसकेको छ । निको हुनेहरूको संख्या ९० हजार नजिक रहेकाले कोरोना जित्न सकिन्छ भन्ने मनोभावना पनि बढेको पाइन्छ । ७ सय २७ जनाको दुःखद निधन भइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस शिक्षामा कोभिड प्रभाव र स्थानीय तह
संघीय राजधानी काठमाडांै उच्च जोखिममा रहेको छ । कुल संक्रमितको आधाभन्दा बढी अर्थात् ६० प्रतिशत संक्रमित उपत्यका केन्द्रित छन् । चाडबाडसँगै बढ्न सक्ने बजार भिडभाड र जमघटले गाँउघरसम्मै संक्रमण फैलने खतरा देखिन्छ । यो समय जोगिने र जोगाउने हो । संस्कार संस्कृति मनाउने कुरामा परिस्तिथि अनुकूल बनाउने जिम्मा सचेत नागरिककै हो ।
दसैं मनाउन गाउँमा जाने कि नजाने अधिकांश दोधारमा छन् । स्वास्थ्यविद्हरू भन्छन्, ‘यो अनुशासित र व्यावहारिक हुने समय हो । स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड मास्कको उचित प्रयोग, सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गर्ने र साबुनपानीले हात धुनेजस्ता कुरा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, दैनिक छाक टार्नै मुस्किल पर्ने दूरदराजका समूहका लागि मास्कको उपलब्धता, दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र साबुनको प्रयोगमा पहुँच नहुन पनि सक्छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार जनताको कुशल अभिभावक बन्न सक्नुपर्दछ ।
समाजमा धनी र गरिबबीचमा फराकिलो खाडल रहेको छ । मुलुकमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको आधिकारिक तथ्यांक छ । कोरोना कहरमा यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । सानाठूला सबै खालका उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यावसायमा आएको असहजताले धेरैको रोजगारी गुमेको छ ।
धनीको दसैं गरिबको दशा बन्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुहँुदैन । कोरोनाको पोजेटिभ रिपोर्ट हातमा लिई सडकको चर्काे घाममा सेकिएकाहरूका लागि केको दसैं ? वर्षैभरि नयाँ कपडा किन्ने र मासु खानका लागि दसैं कुर्नै नपर्नेहरूका लागि सधैं दसैं । गरिब दुःखी सधंै रोग, भोग र अभावमा हुने दीनदुःखीहरूका लागि केही सोच्ने कि ? सकेसम्म दसैं सबैको हर्ष र उमंगको चाड बन्नुपर्दछ । देखासिकी, तडकभडक र मदिरामय दसैं होइन, समाजिक सौहार्दता कायम राख्दै सभ्य र गच्छेअनुसार हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउनुपर्दछ । कतिपय कुरामा हामी जे छ त्येसैमा रमाउन र घाँटी हेरी हाड निल्ने बानी बसाल्नु नै जीवन सहज बनाउने उत्तम उपाय हो भन्ने बझ्नु आवश्यक छ ।
गरिबको घरमा न त दसैंको रौनकता हुन्छ, न त घर सिँगार्ने तामझाम नै । तर पनि वर्ष दिनमा आउने दसैंमा खुसी हुने र रमाउने प्रयासमा हुन्छन् । बडा दसैं असत्यमाथि सत्यको विजय भएको अवसरमा मनाउने पर्व हो । यो वर्ष नवदुर्गाको कृपाले रोग, भोक र शोकबाट विश्व मानव जगत् नै मुक्त होस् । विभेदको अन्त र सामाजिक सदभाव उच्च रहोस् । सबैले न्यायको अनुभूति गर्न पाऊन् सुख, शान्ति र प्रगतिले सबै नेपालीको जीवन समृद्ध बनोस् यो बडा दसैंको सबैसबैमा शुभकमना !
प्रदेश बिमला पाण्डे - November 23, 2020
प्रमुख सागर पण्डित - November 23, 2020
Breaking News आलोक यादव - November 22, 2020
लहान । लहानमा च्याउसरी खोलिएका अस्पतालहरुको मनपरी अझै रोकिएको छैन । अनुमती नै नलिई खुलेका यहाँका अस्पतालहरुमा उपचार गराउन आएकाहरुको ज्यान नै जाने गर्दा...
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - November 21, 2020
एजेन्सी - September 9, 2020
विश्वनाथ सिम्खाडा - April 6, 2020
बहुविवाह अपराध नमान्ने पक्षमा मत
विदेश एजेन्सी - February 21, 2020
न्यूयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाको युटा राज्यको सिनेटले वयस्कहरूको आपसी सहमतिमा गरिने बहुविवाहलाई अपराध ठहर नगर्ने पक्षमा सर्वसम्मतिले मत दिएको छ ।...
Not-to-be-missed रासस - March 7, 2020
प्रदेश ३ दिनेश थापा - August 13, 2020
एकै दिन ७ अर्बको सेयर कारोबार
अर्थ राजधानी संवाददाता - November 23, 2020
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा करिब ७ अर्बको कारोबार भएको छ । सेयर बजार सूचकमा ज्यादै उतारचढाव नदेखिए पनि कारोबार...
Breaking News आपेन्द्र बस्नेत - November 17, 2020
कोरोना पोजेटिभको हल्लाले सलमान तनावमा
Not-to-be-missed एजेन्सी - November 20, 2020
मुम्बई । अभिनेता सलमान खानले बिग बोसको सुटिङ केही क्षण रोकेर आफ्नो कोरोनाको नमुनाका लागि स्वाब परीक्षण गराएका छन् । केही मिडियोमा अभिनेता सलमानको...
रासस - November 21, 2020
राजधानी समाचारदाता - November 22, 2020
सुजीतकुमार झा - November 20, 2020